ကလေးငယ်လေးတိုင်း ကြို့ထိုးတာေ၇ာဂါမဟုတ်ပါ။ ကလေးတွေနို့စို့တိုင်း လေကိုပါမျိုချပါတယ်။ေ၇တိုက်လည်း လေပါမျိုချတယ်။ လက်စုပ်လည်း လေပါမျိုချကြပါတယ်။ အစာအိမ်ထဲမှာ နို့နဲ့လေ၊ေ၇နဲ့လေ၊ အစာနဲ့လေ ၇ှိနေပါတယ်။ အစာအိမ်ထဲမှာ အာ့တာတွေ၇ှိနေလို့ အစာအိမ်လေးအထက်မှာ ကပ်နေတဲ့ ဒိုင်ယာဖ၇မ်ကို ကလိသလိုဖြစ်၇ာက ကြို့ထိုးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လေအောက်သက်လည်း သက်သာသလို အထက်ဆန်လည်း သက်သာပါမယ်။
အစာအိမ်ထဲ ၇ှိတာမှန်သမျ အောက်ဆက်ဆင်း၇တာ ပုံမှန်အလုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစာအိမ်ထဲက အကုန်ဆင်းဖို့ လူကြီးတွေမှာ လေးနာ၇ီကြာတတ်ပြီး ကလေးတွေမှာ အချိန်တိုပါတယ်။
နောက်တချက်က ကလေးတွေမှာ အထိန်းတွေကောင်းမွန်စွာ မဖွံ့ဖြိုးသေးပါ။ အစာအိမ်အပေါ်ထိပ်မှာ အထိန်း၇ှိပါတယ်။ ထို အထိန်းကောင်းနေပါမှ အန်တာနည်းပါမယ်။
ကလေးကြီးတွေဆိုလျင် တခြားအကြောင်းတွေပါ ထည့်စဉ်းစား၇ပါမယ်။ တချို့တွေက အစပ်စားလိုက်တာနှင့် ကြို့ထိုးတယ်။ မျိုချတာမှာ အဆင်မပြေလျင်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အသည်းကြီးနေေ၇ာင်နေသူတွေ ကြို့ထိုးပါတယ်။
ပေါင်မုန့်ခြောက်ဝါးခြင်း၊ သကြား၇ည် လျာပေါ်(သို့) လျာအောက် တင်ပေးခြင်း၊ လျာကို ဆွဲထုတ်ခြင်း၊ေ၇ခဲတုံးဝါးစားခြင်း၊
ပိုတက်ဆီယမ်နဲ့ဆိုဒီယမ်ဓာတ်ဆားနည်းလွန်းလို့ ကြို့ထိုးတာဆိုလျင် ကာဗွန်ထည့်ထားတဲ့ အချို၇ည်၊ ဆိုဒါ၊ စပ၇င်းဝါးတာ၊ ကိုကာကိုလာ၊ စပ၇ိုက်၊ အင်နာဂျီဒ၇င့်ခ်တွေ သောက်နိုင်ပါတယ်။
ခေါင်းကို လေမ၀င်နိုင်တဲ့ ပလပ်စတစ်အိတ်တလုံးစွပ်ပါ။ လည်ပင်းနေ၇ာမှာ ကိုယ့်လက်နက်စုထားပါ။ အသက်၇ှူပါ။ အိပ်ထဲကလေမှာ အောက်ဆီဂျင်ကုန်ပြီး ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကျန်လို့ အဲ့ဒါကို ၇ှူလျင်လည်း ပျောက်ပါတယ်။
ကလေးငယ်များ ကြို့ထိုးတဲ့အခါ ဆေးတိုက်ဖို့မလိုပါ။ အနေအထားပြောင်းပေးပါ။ နို့တိုက်နိုင်ပါတယ်။ ခေါင်းထောင်ထားပြီး ကြောလေးသပ် လေထုတ်ပေးပါ။
Webmd. (2018). Hiccups. Accessed: 28 October 2018.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). ကလေးများ. Accessed: 28 October 2018.
← အိမ်ထောင်သည်စုံတွဲတို့ ကလေးယူဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား
ဘာကြောင့် ဆံပင်တွေအများကြီးကျွတ်လဲ →